နို့ဖြတ်ထားတဲ့ ဒီအမေကရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေတယ် ရောစပ်ရင်ကောင်းမလား? - Vet Products Group
နို့ဖြတ်ထားတဲ့ ဒီအမေကရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေတယ် ရောစပ်ရင်ကောင်းမလား?
နို့ဖှတထြားသည့ဝွကကြို ရောစပဖြို့ အပှည့အွဝအားကောငွးသောဝကဖွှဈသင့သွညွ မှေးခှံမှ အလေးခိနအွနဲငယမြှှတာကဆွငွးခှငွး အရမွးကှီးမပိနခွှငွးပှညယွိုခှငွးမရှှိခငွးမှာ ကိုယဝွနပြကွကြခွှငွးမရှိစရနြနှေင့ွ ကိုယဝွနခြိုငဈွခငွေးပငဖွှဈပါသညွ။ ဒါပမေဲ့ အလေးခိနအွရမွးကခွှငွး အလှနပြိနခွှငွးဆိုလှှငွ script heat ပှုလုပပွေးပှီး နောကတြဈကှိမကြနွးမာမှ ရောစပမြှုပှုလုပပွေးခှငွးနှင့ွ အစာရစောကို အကောငွးဆုံးကှှေးပှီးမှ နောကရွောစပရွနအွတှကွ သင့တွပြောါသညွ။
တမြှတထြားသည့ခွှံမွားတှငွ ထိုဝကမြွား ရောစပရွမညဆြိုပါက ရှေးခယွထြားသည့နြညွးလမွးအတှကတြနဖြိုးကိုဆနွးစဈရမညွ သို့သောွ ITAC အဖှဲ့အတှကွ တဈဆကကွောမွှေးစပေါက အသင့တွဆြောုံးနညွးလမွးဖှဈလိမ့မြညဟွု
#iTACteam #sows #swine #pig #livestock